I-Best Corporation CRM ebhalwe nguZeevou
Izici » Inkampani CRM
Yakha futhi ukhulise ubudlelwano nababhuki bebhizinisi, ngaphandle kokulahlekelwa umkhondo wezidingo zabo ezithile.
Inani lokubhuka okuqondile umhlinzeki wokungenisa izihambi akwazi ukukufeza njalo kuncike kakhulu kubhizinisi labo lenkampani. Kodwa-ke, ukwakha inani elihle lokubhuka ezinkampanini kuzivakashi zebhizinisi akuyona inkinga esheshayo. Ukuqinisekisa ukugeleza okungaguquguquki kwezivakashi ezinkampani kungathatha iminyaka yokuxhumana nezinkampani nokwakha ubudlelwano obususelwa ekwethembeni nasekusebenzeni kahle kwamakhasimende okwenzelwe izidingo zabo.
Ngenkathi abaningi abahlinzeka ngendawo yokuhlala enezinsizakusebenza zokuxhumana nezinkampani futhi baqhube ukubhuka kokuqala, iningi lintula amathuluzi nobuchwepheshe bokulandelela kahle imali abayisebenzisayo, baqhubeke nokwalokho abakuthandayo futhi baqonde ubudlelwano phakathi kwabasebenzi basehhovisi nabavakashi abaxhunyiwe kunoma iyiphi inhlangano enikeziwe.
Ngabe Usizo lweZeevou's Corporation CRM lungasiza kanjani?
Ngaphandle kwesakhiwo esakhelwe ngaphakathi Isihambi CRM, I-Zeevou iphinde yathuthukisa i-Corporation CRM. Ngokusebenza kahle kakhulu Inqubo Yokuqinisekisa Ukubhuka Yezinyathelo Ezi-5, UZeevou usiza ukukhomba kalula ababhuki bebhizinisi. Lokhu kuvumela abahlinzeki abaziphakelayo ukuthi bakhe iphrofayili yebhizinisi ngalinye, futhi babhale imininingwane ephathelene nebhizinisi, abasebenzi basehhovisi abafaka ukubhuka, kanye nezivakashi ezihlala ezindaweni zazo.
Ukuba nomgogodla wakho konke ukubhuka nezinkokhelo eziphathelene naleyo nhlangano kuvumela abaphathi bamaketanga amahhotela ukuthi bakhulise kahle ubudlelwane babo namakhasimende abo ezinkampani. I-Zeevou futhi ikuvumela ukuthi ucacise umphathi we-akhawunti yenkampani ngayinye engezwe kwi-Corporation CRM, bese ufaka noma imaphi amanothi maqondana nokuthandwa noma izidingo zalowo webhuki webhizinisi.